अचानक तपाईको तौल घट्यो ? यस्तो छ तौल बढाउने सजिलो काइदा::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
अचानक तपाईको तौल घट्यो ? यस्तो छ तौल बढाउने सजिलो काइदा
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : मङ्लबार, माघ १६, २०७४
हामीले देखेका छौं, कतिपय व्यक्ति जति खाएपनि साह्रै खिरिलो हुन्छन् । दुब्ला-पातला हुन्छन् । हेर्दै टिठलाग्दो देखिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?
यदि छिटो वजन बढाउने मन छ भने काजू, किसमिस, बदाम र ओखरले सघाउनेछन् । यी चिजहरुबाट शरीरलाई उच्च क्यालोरी मिल्छ । यसमा अत्यधिक फाइबर र एन्टिअक्सिडेन्ट्स पनि हुन्छ जसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउँछ र विकासमा सहयोग गर्छ ।
क्यान्सर सहयोग समूह र क्यान्सर हस्पिटलको आयोजनामा ‘सुदिप्त क्यान्सर सर्भाइभर र्याम्प शो’ हुँदै
सप्तरीमा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुने
भियाग्राको प्रयोग कति उचित ?
समयमा रोगको निदान र उपचार भएमा धेरै जसो क्यान्सर रोग निको हुन्छ : प्रा.डा. पौडेल
युवायुवतीहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्नु दुःखद :कडरिया